“U soo bixitaanka Champions League aniga ahaan way ka muhiimsan tahay ku guuleysiga koob gudaha ah.” – Tuchel – Gool FM
Dajiye May 18, 2021
(London) 18 Maajo 2021. Tababaraha Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa hoos u dhigay tartamada maxaliga ah ee kooxdiisa ay ku tartameyso xilli ciyaareedkan, isagoo carabka ku adkeeyay in u soobixitaanka tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo socda ay ka muhiimsan tahay ku guuleysiga FA Cup.
Leicester City ayaa ku guuleystay koobkeedii ugu horreeyay ee tartanka FA Cup-ka kaddib markii ay kaga adkaatay kooxda Chelsea 0-1, ciyaar xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Wembley.
Kaddib guuldarrada Chelsea ka soo gaartay kooxda Leicester City ayaa ka dhigtay in Thomas Tuchel uu la kulmay dhaleeceyn baahsan oo ku saabsan, taasoo ah in kulankii finalka FA Cup-ka uu ku soo galay shax aan ku habooneyn, qaarna waxay ku eedeeyeen inuusan muhiimad weyn siinin taas.
Haddaba tababare Thomas Tuchel ayaa kahor kulanka ay caawa Leicester City ku wada ciyaari doonaan horyaalka Premier League, wuxuu u sheegay warbaahinta:
“U soo bixitaanka Champions League xilli ciyaareedka soo socda aniga ahaan way ka muhiimsan tahay ku guuleysiga koob gudaha ah.”
“Waa inaan idin cadeeyaa, ujeedku wuxuu ahaa inaan sameeyo wax kasta oo suuragal ah, si loogu soo gudbo Champions League, ee ma aheyn inaan ku guuleysano koobka FA Cup-ka, sababtoo ah ku guuleysiga FA Cup-ka kuuma suurtogalin doono inaad u soo baxdo Champions League xilli ciyaareedka soo socda.”
“Kama qoomameynayo wax walba oo aan ku sameeyay finalka FA Cup, laakiin waa inaa ku sii fiicnaano go’aan qaadashada garoonka.”
“Waxaan kuu xaqiijinayaa inay jiraan kooxo badan oo ka maseyraya xaalada aan ku jirno, oo jeclaan lahaa inay joogaan meesha aan joogno ee ah finalka Champions League.”
“Waxaan gaarnay finalka FA Cup-ka iyo finalka Champions League, waxaana heysanaa fursad weyn oo aan kaga mid noqon karno afarta sare ee Premier League, kaddib markii aan ku jirnay kaalinta sagaalaad, marka waxaan awood u leenahay inaan ka gudubno xaaladdan adag.”
Waxaa xusid mudan in carqalad kasta oo ka timaadda caawa Leicester City ay la micno tahay rajada Chelsea ee ah inay ku guuleysato booskeeda afarta sare ee Premier League inay sii adkaaneyso, mana jiri doonto fursad kale ee hartay oo aan ka aheyn inay guuleystaan ​​finalka Champions League oo ay kula balansan yihiin naadiga Man City.